Antonov An-24RV FSX & P3D - Rikoooo
Downloads 17 417
Mpanoratra: Samdim Design, Andrey Felis, Yevgeniy (Bleyd), pribory Sergey (Dzies), P3D-64 adaptation nataon'i Rikoooo
Nohavaozina taminy 13 / 08 / 2019: Fanitsiana ny feon'ireo motera izay tsy nohenoina tamin'ny herinaratra farany, nanampy ny refy tsy hita, hoy ny GPS GARMIN 500. Adaptation ny autopilot ho Prepar3D v4. Satria tsy mifanaraka amin'ny GPS KLN90B GPS Prepar3D v4 (64 bits) dia nosoloana dikan-tsarimihetsika misy fiasa voafetra ihany ho azy Prepar3D v4 (tsy misy fiovana amin'ny FSX ary FSX-Steam). Tsy ilaina ny misintona ary mametraka ny KLN90B GPS ho an'ireo mpampiasa Prepar3D v4 dia mbola tsy namboarina ho an'ny simulator io. Azonao atao ny mampiasa ny GPS GARMIN 500 izay efa namboamboarina mialoha.
Manampy amin'ny Prepar3D v4 64-mifanentana amin'i Rikoooo.
Ity misy fanampim-panazavana iray hafa izay maneho fiaramanidina iray avy amin'ny USSR teo aloha izay manana toetra mahatalanjona raha mahafantatra fa maimaim-poana izany. Io Antonov An-24RV dia mendrika indrindra, tafiditra ao amin'ny famoahana 4: IzhAvia, AFL, Aeroflot ary Tjumavi. Ny cockpit virtuel dia feno tanteraka ao amin'ny 3D, ho gaga ianao amin'ny sehatra misy 3D endri-tsoratra sy horonam-peo HD, ianao dia manana fahafahana miditra amin'ny ambaratonga maro ao amin'ny efitrano isan-karazany. Ahitana feo sy animé tena izy. Ny tena zava-misy amin'ity fanampiana ity dia tena nandroso.
Antonov An-24 dia fiaramanidin'ny turboprop izay afaka mitondra ny 44 mankany amin'ny mpandeha 52 avy amin'ny Antonov Engineering, any Ukraine (ankehitriny any Okraina). Ny fiaramanidina dia nantenaina hikorontana tany ambanivohitr'izy ireo ary nahomby tokoa na dia tamin'ny fenitra tandrefana aza, na dia ambany aza ny tombom-barotra ara-barotra nentin'izy ireo satria natahorana noho ny hamafin'ny habaka tsy laitra.
Ny dikan-teny roa lehibe dia nalaina avy amin'izany, ny Antonov An-26 misy varavarankely goavam-be any ambadika sy Antonov An-30 miaraka amin'ny orona fitaratra amin'ny fanaraha-maso sy fandraketana asa misiona. (Wikipedia)
FAHAGAGANA: mba hiasa tsara ny Antonov An-24RV ary hisoroka ny fahadisoana "tsy afaka mitondra entana /sc_acc.dll" dia ilaina ny misintona sy mametraka ny dikan-tsasam-peo farany farany an'ny KLN90B (GPS), ny fametrahana an'ity Gauge ity dia takiana indray mandeha ihany. .
Tsindrio ny rohy eto ambany mba télécharger ny habetsahan'ny.
Antonov An-225 HD Pack Livery FSX & P3D
Shuttle space Space Antonov AN-225 FSX & P3D